လော ်ဗီမြ နှင့် Commie ကြောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » လော ်ဗီမြ နှင့် Commie ကြောင်
လော ်ဗီမြ နှင့် Commie ကြောင်
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Sep 8, 2015 in Aha! Jokes, Satire | 21 comments
ဟဲ့ကောင် ငကြောင်ကြီး.. နင့်ကို ယီးဗဲ။ မနက်စောစော စီးစီး အမြှားဓဂါ မေတ္တာပို့ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဇယ်ခ ျိန်၊ သူဒေါ်ဂေါင်းတြား ပွားမြှားဂ ျိန် အရုတ်တ အနှပ်တ ဆဲဆိုသံ ထွက်ပေါ်လာအိ။ ခမြှာ… အမ်တီလော ်ဗီမြ.. အနော ့်မှာ ဘာအပြစ် ရှိလို့လဲ။ ကြောင်ကြီး တအံ့တဩ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားမိသည်။ ဂေဇက်ရွာမှာ ဒီလိုမ ျိုးလည်း ရှိသေးသဂိုး။ အေဗောင်ကြေးကြီး နင့်လှုပ်ရပ်တွေ လ ျက်တန်းကလ ျက်.. ကြောင်ကြီး ယောင်ရမ်း၍ လ ျှာသပ်မိသွား၏။ ဆိတ်အေးအေးထား လော ်ဘီမြ… ဝံလေ ထွက်လေ မှန်မှန်ရှု.. ဟုတ်ပီလား၊ ဆိတ်ထဲက ၁..၂.. ၃..၄ ရွတ်.. ပီးမှ ပြောခ ျဉ်တာပြော.. အနော ်စောင့်နေမဲ။ ပြောလေ လော ်ဘီမြ ပိုဒေါသထွက်လေ.. ဒေါသထွက်သီမှ ဆွေ့ဆွေ့ဗင် ခုန်နေပီ။
ဒီကိစ္စ ကြောင်ကြီး လွန်တယ်၊ အထည်ခ ျ ုပ် ဆတ်ယုန်သူဌေး ခိုနီဒုံမှ ဝံဖဲ့၏။ မင်းအနေနဲ့ အဲလို မပြောသင့်ဗူး.. မြက ယဉ်ယဉ်ကေ ျးကေ ျး ပြောတာ၊ နင်သာ နင်ပဲငဆ ပ ျံပက်လို့ ဖြစ်တာ။ ကြောင်ကြီး ဆွံ့အသွားခါ…. ဟုတ်ပါတယ် အနော ်ယိုင်းပ ျမိပါတယ်။ အေးဟုတ်တယ် နင့်လို ဘုရားမဲ့ တ ျားမဲ့ သပ်တဝှာ မှုတ်ဖူး.. ဟိုက်.. လှည့်ကြည့်လိုက်တော့…. ထမီတပြင်ပြင်နှင့် လူမိုက်လှံခင်ဇော ်။။ လူလိုရင် ပြောကွ ဆိုဂါ တဖက်ပိတ်မဲသွပ်၊ ခြိမ်းပုတီး နှင့် ကွင်သဘုံအတုတို့ လက်သီးတပြင်ပြင်နှင့် ဆွမ်းဂ ျီလောင်းယံအသင့်။ လေမားမားကမူ လာချောင်းကြည့်သူမ ျားကို တီဗွီထဲက အသံတွေပါရှင်.. ဘာမှမဟုတ် စိုအိ။ ဗိုဂဒေါ်သာဂူး၊ ပီအာရ်ပေါဟိတ်မင်းခံ့ကြော ်၊ သပ်ခေ ျာင်ခ ျျု ိုဂ ျီး နှင့် ဖက်ဆစ်ဖြိုးဂ ျီးတို့ကား အေးအေးလူလူယပ်ခပ် ကြည့်နေသည်။ မားနိုဂ ျီးကမူ ဂ ျူ နိုလေးအား ကားပေါ်တင်လ ျက် ဃလိုင်စင်လေး တကိုင်ကိုင်နှင့် ကားဖြင့် တက်ကြိတ်ပေးရမလား ပဏ္ဏာလှုပ်အိ။ ကြောင်ကြီးလေး ခမြှာမှာ မ ျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်… ငါ ဘာမ ျား မှားသွားလို့ရဲ…အဟင့်။
အားလုံး ပြီးပြီဆိုမှ ကြောင်ကြီး ခြေလက် လေးဖက်စလုံး ကြိုးတုပ် တုတ်လ ျှိုလ ျက် ရွာတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ ဟေ့ ဒီမှာကြည့်ထားဂ ျ.. ငါ့ကို အာခံသူ ဒီလိုဖြစ်မည်။ တရွာလုံး တုပ်တုပ်မ ျှ မလှုပ်ဝံ့.. ကြောင်ကြီးဘော ်ဘော ်နူးဗာဂီဂါး အိပ်လ ျှာထဲ ဒိုက်ထိုးလွန်သဖြင့် မထနိုင်ပြီ.. က ျားမဝေါင်းမှာမူ ဓါးဝယ်သား ဆားယံဆိုဂါ တခါမှ မစီးဖူးသော လိင်ပ ျံပေါ် ရောက်နေအိ။ ကြံရှိသော ဆြာဂ ျီး ဆ ျာမမ ျားအားလုံး ဘေးကင်းရန်ကွာ ပ ျပ်ဂဒိန်ကိစ္စသာ လုံးပန်းကြတော ့သည်။ ရွာနိုင်ငံရေးဂါး လော ်ဘီမြ လာဘ်ထဲ ရောက်ခြေပီ။ အတိုက်အခံ ကထူးဆမ်းပင်လ ျင် ဒီတခေါက်တော့ပါတီက ျိ မဲပေးပါမြည် လေပြေထိုးအိ။ ရှစ်ပူးမ ျား မပါ၍ ရွာထိပ်မှ ဆဲဆိုဖူးသူ ဆော ်ဒီပ ျံ အူးမွပ်ခဲဂါး ဆိုက်အသစ်ဆိုဂါ မော်နီတာနှင့် မြှက်နှာ မခွာဒေါ့၊ ထိုဆိုက်ကား ပွန်းဆိုက်တည်း..။ အူးမ ျိုးနှင့်အူးမိုက်ကား ကယ်ဖို့ဝေးစွ.. မ ျက်နှာလိုမြက်နှ ျ တုတ်ပင် ဝံထမ်းပေးကြသည်။ တမတ် တမတ်နှင့် စစ်တမတ်သားလောက်ပင် ကတိမတည်သော လူဂ ျီးမြှားဗေတီး။
ထိုသို့ လော ်ဘီမြအား တရွာလုံး ဖိန့်ဖိန့်တုံအောင် ကြောက်နေဂ ျိန်ဝယ် မေခလာ နှပ်သမီးအသွင် ကူညီစောင့်ရှောက်သူမှာ မေ ျှာ်လင့် မထားသည့် တိုင်းရင်းသူလေး ကွင်မကင်းကောင် နှင့် ကခြင်မလုလု တို့ဖြစ်သည်။ ကြောင်ကြီးအား မြင်းမြင်းခြင်း က ျားက ျားခြင်း မေတ္တာသပ်ဝံမိဂ ျအိ။ ကြောင် အစာမကျွေးရ ဆိုသဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်ဒွင် ထောပတ်၊ပ ျားရည်၊ကြက်ဥ၊ဒိန်ခ ျဉ် စသည်တို့ လိမ်းက ျံလ ျက် အစောင့် ပါးဂွက်အာဏှာသား တလှုပ်သဗုံ ဝှီဂါကြေးမုံဂ ျီး အလစ်တွင် ကြောင်သဘောယှိ အလှူ ဒါနှ ပြု ဂ ျသီ။ ကြောင်ကြီးအဖို့ ရွေးဆရာ လန်းမရှိ.. မ ျက်စေ့စုံမိတ်လ ျက် မရွံမလ ျှာ အဟာရ မပြတ်ရေး သည်းခံတီးရလေ၏။ ကာလာသားသမီး အပေါင်း တွေးနေမြည့် ဟိုဆိတ်ကား လားလားမြှ မဝံခြေ.. ပလပ် ပလပ်.. အဟုတ် တဂယ် ဖ ျားစူးတီး။
ကြောင်လ ျှာ မပြောင်ပါ အမှောင်မှာ ရောင်ဖြာ
လော ်ဘီမြမှာ အကြံအောင်ပြီဆိုဂါ လွန်စွာပေ ျာ်နေ၏။ ဟိ.. ငါတော့သူဂေါင်းပြု ခံရဒေါ့မယ်… အနည်းဆုံးဒေါ့ အင်ဃလှံသန်အမှက် ဖစ်မှာ…။ ဟေ့ ဒီအခ ျိန်မှာ တသွေးတသံတမိန့်ကွ၊ စောဒက မတက်နဲ့.. ဇက်ပြုတ်သွားမယ်.. ဘာမှက်သလဲ။ ဓါးကြိမ်း ကြိမ်းလိုက်.. ရော ့ပဲကြီးလှော ်စား.. ရေတွင်းက ရေခပ်သောက်.. ပီးရင် ငါ့စဂါး နားထောင်။ ငါ့ ဆန့်ကြင်ရင် ကူမြူ နစ် ဘုရားမဲ့ အဖ ျက်သမား အခေ ျာင်သမား…။ တေဒါတောင် ကြောင်တေ ဝက်တေ တေရမည်။ ခြိမ်းလိုက် ခေ ျာက်လိုက် ဟိန်းလိုက် ဟောက်လိုက်နှင့် အမိုက်တိမ်သလ္လာ ဖုံးလွှမ်းနေသလောက် ထမင်းဟေ့ ဟင်းမေ့ သာယာနေကာ နတ်မင်းစည်းစိမ် ခံစားနေသူကဒေါ့ အစာဖြတ်ရေဖြတ် ခံထားရသည်ဆိုသိ အာခေ ျာင် လ ျှာခေ ျာင် ကွန်မြူ ကြောင် ဖြစ်ပေဒေါ့သဒီး…။
ဇာတ်လမ်းပီးပါပီ။ (ဝံခန်ခ ျက်။။။ အီစာကို လ ျှာသပ်လ ျက် ယေးသီ။)
အာဏာလေး ပြား၅ဝလောက်.. ရပါစေဦး ကကြောင်ရယ်…။
တော်ကြာ.. တောမီးထဲရောပါ.. ကြောင်ကင်ဖြစ်သွားမှဖြစ်..။
ကင်န်ပိန်း စတက်တဂျီအရဆို.. အဲလိုဝေဝေဝါးတွေလည်းရောလွှတ်ရတာပ…။
၁) လက်ရှိအာဏာ ဇွတ်ယူပါတီ
၂) လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းတွေကလည်း သူတို့ အမိန့်အောက်မှာ
၃) သူတို့ ကို ကာကွယ်ဖို့ ညောင်၂ပင် ဥပဒေ ကြီး က လည်း ဇွတ် ပြဌာန်းထားပြီးသားးး
၄) လူဆိုး သူခိုး ထောင်ထွက် တွေနဲ့ ဖွဲ့ ထားးတဲ့ လက်မရွံ့ တွေ ကို ခိုင်းနိုင်သူတွေ
၅) မဲလိမ် မဲခိုးတတ်မှန်းး အရင်ရွေးကောက်ပွဲ တွေထဲက သိကြရပြီးသားး
၆) ရွေးကော်မှူးဆိုတာလည်းး သူတို့ ဘက် ပင်းမယ့် ဘောင်းဘီချွတ်ကောင်ကြီး
၇) မဲပေးဖို့ ခက်အောင်လည်းး အမျိုးမျိုးလုပ်နေတာ
၈) လက်ကျန်သက်တန်း မှာ ရသမျှ အကုန် အလွတ်အကျွတ် ခိုးး နိုင်ငံမှာ ရှိသလောက် အကုန်ရောင်းစားနေတာလည်း မျက်မြင်ပဲ
၉) ဒီကြားထဲ မဲပြန့် အောင် ဟိုတယ်ဂေါင်း ကို ပါတီ ခွဲထောင်ခိုင်းထားသေးတယ်
၁၀) ဘာသာရေးနဲ့ လည်း လှည့်ပြီးသွေးခွဲထားသေးတယ်
ဒီ ၁ဝ ချက် က သိသိကြီးနဲ့ ဖွတ်တွေကို handicap ပေးးထားးရတာ..
ဒါတောင် အမေ စု ကို အဝေဖန် မခံနိုင်ဘူးလာမပြောနဲ့..!
တန်းတူ ယှဉ်ရတာ မဟုတ်တဲ့ပွဲ မှာ ဘာမှ သာတူညီမျှ လာဝေဖန်မပြနဲ့..!
အဘ ဖက် စောင်းနင်းတွေက ကြားနေ နာမည်ယူပြောတာတော့ မခံနိုင်လို့..!
မျှတူ ဝေဖန်ချင်ရင်တော့ အဘ တွေ အကုန် အနှစ် ၂ဝ အကျယ်ချုပ်နဲ့နေပြီးမှ လာဝေဖန်..!!
ဒါ က အမေ စု ကို အဘတွေ မှီနိုင်မယ့် တစ်ခုတည်းသော နည်းမို့ ပြောတာ..
ပညာ အရည်အချင်း အတွက်တော့ အင်္ဂလိပ်စာ မီးးနင်းးတွေ မကျက်ခိုင်းသေးဘူးနော်..!!
Otherwise အမေစု လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်ရတဲ့ အရပ်သားး အစိုးး ဖြစ်ပြီးး အနှစ် ၂ဝ စောင့်ပြီးးမှ သာ ဝေဖန်ကြနော် သလားးး
ကျုပ်တော့ ပါတီတကာ့ ပါတီမှာ
အော်ဂီ ပါတီပဲ တအားကြိုက်ဒဲ့ယ့်…
ထိုကြောင်အား အရှင်လတ်လတ် အရေခွံစုပ်ကာ ဖင်တံစို့ထိုး မီးကင်ရန် သင့်ချေပြီ။
( အူးမ ျိုးနှင့်အူးမိုက်ကား ကယ်ဖို့ဝေးစွ.. မ ျက်နှာလိုမြက်နှ ျ တုတ်ပင် ဝံထမ်းပေးကြသည်။ )
ကျုပ်ဖာသာ အေးအေးနေပါရစေဗျာ ၊ မွေးထားတဲ့ သား စာကောင်းကောင်းလိုက်နိူင်ဖို့ ၊
မွေးထားတဲ့ ငါးလေးတွေ အချိန်မှန်မှန် အစာကျွေးဖို့ ၊ မမွေးပဲ ရောက်လာတဲ့ ကြွက် ၂ ကောင်ကို သုတ်သင်ဖို့ ၊
အဲဒါတွေဦးစားပေးနေရလို့ ဘီယာတောင် နပ်မမှန်ချင်
အဲ့ကြောင်ကို တောက်တောက်စင်း နုတ်နုတ်စင်းပြီးရင် ဒလိမ့်တုံးနဲ့ လိမ့်
ကျနော်က ရုပ်ရှင်ထဲကရဲတွေလို ရွှေရင်ထေးထေး အဲမွှားလို့ ရွှေရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ အသေကောက်ဖို့စောင့်နေတာဘာ
.ပေါက်ကရပြောကြောင်ကြီး ထံသို ့ပေးစာ…..
.အသင်ကြောင်ကြီးသည်ရွာထဲတွင် ပေါက်ကရပြောခြင်း… တပါးသူများအာ တည့်ရိုက်သောလည်းကောင်း သွယ်ဝှိုက်သောလည်းကောင်း စော်ကားခြင်း အမျိုးမျိုးပေးသည်ကိုတွေ့ရသည်…..
.ထို ့သဖြင့် သင့်အား ရွာပြင်သို့ နှင်ထုတ်ရင် အလျင်းဆန္ဒရှိသော်လည်း…. ဒီမိုရွာအမည်အား မပြတ်စေသောအလို ့ငှာ… အတိုက်အခံဆိုတာ ရှိကောင်းရဲ့ဟု သဘောပိုက်ပီး သင့်အား ညင်သာစွာ သတိပေးဆိုလိုက်သည်….
.ယနေ ့အချိန်မှအစ ရွာသူားအပေါင်းအား တည့်ရိုက်သော်လည်းကောင်း သွယ်ဝှိုက်သော်လည်းကောင်း.. စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမှူ ပြုလုပ်လျင် ရွာသူား အများစုက သင့်အား ကျွတ်ကျွတ်ကင်သောမီးခဲပေါ်တွင် အရွေခွံစုတ် အရက်စိမ်ကာ အစိင်းကင်စားရန် အာသီသရှိကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်…..
ဒီမိုရမှ ဒီကြောင်ကို အရေဆုတ် ကောင်လုံးကင် မီးပုံပွဲလုပ်ပြီး အောင်ပွဲခံရမယ်။
အေးပါ ကွန်နစ် ကြောင်ကြောင် မောင်မောင်ကြွပ် ရယ်။
နိ ကို ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်သေး ဝူး။
NLD က အမတ်လောင်း ပညာတတ် မိန်းကလေး တွေ ချောမှ ချော။
.တွေ့ပြီးပြီလား ကွဲ့။ အားရလှသကွယ်။
ဒါမျိုး တွေ မြင်လို့ သူက ကြိုပြောထားတာ ကိုး။
လူကို မကြည့်ကြဖို့။ အခုမှ ရိပ်မိ တော့တယ်။
ဟို အစိတ်သား တောင် ကျိတ်ဝမ်းသာ နေမလားမသိ။
လွှတ်တော်ထဲ ငိုက်ဖို့ အကြောင်း မရှိတော့ ဆိုပြီး။
တစ်ချို့များ ပခုက္ကူ ပြောင်းကြဖို့ ပြင်နေကြလေရဲ့။ :-))))
ပုဆိန်ရိုးများ… လို့.. မပြောလိုပါ… မပြောလိုပါ..။
ပေါင်အမှတ် မိကွန်ထောတော ့ဂွတ်သဗြ.. အကိတ်ကြီး… ဂွိ ဂွိ။
.ကေ ျာင်းတက် ခေါင်းလောင်းသဏ်…
အသက်.. ၄၂… အိမ်ထောင်ရှိပုံမရ…။
အင်း… မြန်မာပြည်အမျိုးသမီးထုဘဝ.. ထင်ဟတ်နေ..။
အပေါင် ပြန် ပြီး မဲ ပေးမှဘာာာာ း)
ကြောင် ဘာသာစကားကို ခုမှ သင်ယူနေရသလိုပဲ …
တော်တော် ဖတ်နေရတယ် .. မုန်းထှာ အေ ..
မားနိုဂ ျီးကမူ ဂ ျူ နိုလေးအား ကားပေါ်တင်လ ျက် ဃလိုင်စင်လေး တကိုင်ကိုင်နှင့် ကားဖြင့် တက်ကြိတ်ပေးရမလား ပဏ္ဏာလှုပ်အိ။
ကြောင်ကြီးကို ကွန်တိန်နာကားနဲ့ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီ ကြိတ်ခြင်ပါသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ ငလိုင်စင်ရရှိရေး ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
လူပဲကျိကျိ မူပဲကျိကျိ ပညာပဲကျိကျိ စမ်းချင်တဲ့ဘက်ကစမ်း….
တခွိခွိဖြင့် လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖတ်ရှုသွားသည်။